WordPress NiceAdmin Plugin Shanduro 1.0.0 Yakaburitswa | Martech Zone
Svondo, Kubvumbi 8, 2007 Chitatu, July 4, 2007 Douglas Karr
Mushure megore rekutarisa iyo WordPress manejimendi mushandisi interface, ini ndanga ndichinyanya kuneta nazvo. Alpsh ndakaona chirevo changu pane imwe blog uye nenyasha akanditumira iyo WordPress admin plugin iyo imwe mushanduri yaakashanda pairi. Ini ndakagadzirisa iyo plugin ndichishandisa magiraidhi kubva kuWebhusaiti yeWebhusaiti uye nekuvaka nyowani admin masitayiti. Heino skrini:
Izvo hazvichinje iko kushandiswa kana mashandiro eWordPress chero, zvinongoita kuti zvive nyore zvishoma kutarisa! Ndinovimba unoifarira!
Kutenda kwakakosha kunoenda kuna Sean uko Geek Ine Laptop. Sean ane ziso rakatarisa rekuyambuka-browser CSS saka ndakanyorera rubatsiro rwake kuti ndigadzirise masitaera ndisati ndaregedza. Ndatenda, Sean!
Dhawunirodha iyo WordPress Plugin kubva kuProjekiti Peji
Kune imi mose vanhu vane WordPress mabloggi, ndingafarire chaizvo iwe kuburitsa iro izwi pane izvi neangu mumwe Projects. Semazuva ese, kana yako trackback yakanyorwa, ini hapana inotevera yakadzimwa kuti iwe ugowana chikwereti cheiyo chinongedzo! Ndatenda!
Apr 8, 2007 pa 11: 38 PM
Waive mufaro wangu kubatsira neplugin iyi uye zvinhu zvichifambira mberi, ndichaita basa rakawanda pazviri sezvinodiwa.
Apr 9, 2007 pa 12: 01 AM
Izvi zvinotaridzika zvakanaka zvichazvishandisa!
Apr 9, 2007 pa 8: 22 AM
Apr 9, 2007 pa 1: 04 AM
Basa rakanaka Doug. Tinofanira kuidaidza kuti Yakanyanya WordPress Makeover 🙂
Apr 9, 2007 pa 8: 21 AM
Zvakanyanya zvinoda kuitika zvinotevera, AL! Izvi zvinoshandura chitarisiko uye kunzwa - asi zuva rinofanira kuva pedyo kuti Admin anogona kuva nematehwe uye misoro pasina kudiwa kweplugin!
Zvichida iyo admin theme inofanira kunge iri admin.css mudhairekitori remusoro kuitira kuti vashandisi vagone kuzvirongedza pamwechete!
Apr 9, 2007 pa 8: 04 AM
Basa guru ikoko Doug .. Kutaura chokwadi, ndakafinhwa kusvika pakufa nekuona iyo imwechete admin panel kasingaperi ..
Chinhu chakanakisa ndechekuti inochengeta mabasa uku ichingogadzirisa chimiro chete.. Ndizvo zvandaida. 😀
Apr 9, 2007 pa 8: 19 AM
Apr 9, 2007 pa 8: 53 AM
Ida zvidzitiro zvitsva. Wakawana dambudziko rimwe chete. Iyo Presentation/Theme Edhiza skrini haina kunaka. Hwindo rekodhi idiki kwazvo kuti rishandise. Kadikidiki kunge chigunwe chinotaridzika.
Apr 9, 2007 pa 12: 02 PM
Unogona kunditumira skrini pamwe neiyo OS/Browser yauri kumhanyisa?
Apr 9, 2007 pa 5: 30 PM
Tichakutumira skrini. Uchishandisa xphome 5.1.2600 Service pack 2 kuvaka 2600 uye IE 7. ?
Ndakagadzira faira rePDF rescreendump. Ndotumira inoibatanidza kwauri kana ndawana yako email adr.
Apr 9, 2007 pa 6: 38 PM
Iyo inyaya yakashata! Zvinotaridza kuti saizi yefonti yakangoenda kune 1 kana 2 px saizi. Kunyangwe pandinoidarika mucss, handisi kuwana mhinduro chaidzo. Arrgh, IE!!!
(PS: Enda Firefox!) 🙂
Apr 9, 2007 pa 8: 55 PM
Chokwadi ngachizikanwe, ini handishandise icho skrini kugadzirisa mafaera zvakadaro. Ndinozviita munharaunda ipapo ftp it up. Asi ndakanzwa ndichifanira kukuzivisai nezvazvo.
Iyo screendump inogona kuwanikwa pano:
Apr 9, 2007 pa 7: 37 PM
Izvi zvakanaka. Ini handina kuona zvakaitwa nemumwe mugadziri, asi izvi zvakanaka.
Ndatenda nekutaura 🙂
Apr 9, 2007 pa 9: 43 PM
Ini ndinoda iyi theme menyu, inyanzvi kwazvo. Ndiri kuzviisa pane ese 8 emabloggi angu, uye ndichiita kuti ive yakajairwa plugin kune yangu blog vatengi.
Apr 14, 2007 pa 1: 30 AM
Sezvakataurwa naRoss, ndiri kusanganawo nedambudziko rimwe chete neIE7 + WinXPSP2.
Apr 14, 2007 pa 5: 48 PM
Inoratidzika kunge yakangofanana neyekare. Chii chawakashandura mutemplate kuti iwedzere kubatsira? Paive paine chimwe chinhu chaive chakakonzera shanduko here?
Apr 14, 2007 pa 6: 11 PM
Shanduko dzese dzinoyevedza, Thor. Iwo mafonti uye masitayera zviri nyore zvishoma pameso. Ndinoda kutora chibayo pakunyorazve chinhu chekupinda asi nguva haisi parutivi rwangu. 🙂
Apr 27, 2007 pa 11: 44 PM
Pachave nekugadziriswa kweIE munguva pfupi? Iyo theme-editor bhokisi idiki kwazvo.
Gumiguru 6, 2007 pa 7:08 AM
Yakawedzera gadziriso diki yeWordPress 2.3.
Jan 12, 2008 na9:12 PM
Ndakaona mazwi aya kubva kumashure muna Kubvumbi, ndinofungidzira kuti ndakawana yakafanana "chigunwe" saizi nyaya ine editing zvikamu ...